Madaxweynaha Puntland Gaas oo Garowe lagu soo dhaweyeey – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2017 3:22 g 0
Madaxweynaha ayaa kahor inta aanu kasoo ambabixin magaalada Qardho waxa uu kulan gaara la qaatay Boqor Burhaan Boqor Muuse Boqor, waxaana uu kulan kaasi ahaa mid ku qotoma salaan iyo is xog-waraysi guud ahaan xaaladda dalka.
Madaxweynaha iyo weftigiisa oo safarkooda sii wata ayaa waxaa ay kusoo hakadeen laguna soo dhoweeyey Tuulada Dalsan iyo degmada Dangaro oo ay ka qayb qaateen soo dhoweyntooda maamulka degmada Dangorayo, Nabadoono, wax garad, aqoon yahano iyo shacabka degamada Dangorayo iyo Tuulada Dalsan.
Soo dhoweyn kadib Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey ayaa kulan gaara la qaatay golaha degaanka degmada dangorayo, waxgaradka magaaladasi, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo masuuliyiin kale, waxaana uu kulankaasi ka dhacay xarunta dawladda hoose ee degmada Dangorayo.
Sidoo kale Masuliyiinta iyo maamulka degmada Dangorayo ayaa sheegay in ay ku mahadinayaan xukuumadda uu gadh-wadeenka kayahay Madaxweyne Gaas waxqabadka lataaban karo ee ay ka fuliyeen guud ahaan degmada iyo degaanada hoosyimaada, iyagoona xusay in shirka Kismaayo ahaa mid guul u ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dawladdaha xubnaha ka ah DFS madaama ay ka tashanayeen masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo danahooda gaar ka ahba sida kuxusan dastuurka dawladda fadaraalka Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey ayaa ugu danbayn soo gaadhey caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe, waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey guddoonka Golaha Wakiilada Puntland, maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garoowe, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiisha ciidamada Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland, nabadoono, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahano, iyo shacab aad u tiro badan oo u heelanaa soo dhoweynta Madaxweynaha iyo weftigiisa.
Soo dhoweyn kadib Madaxweynaha ayaa warbaahinta kula hadlay qasriga Madaxtooyada Garoowe, waxaana uu Madaxweynuhu shacabka gobolka Nugaal uga mahadnaqay soo dhoweynta isaga iyo weftigiisa, isla markaana waxa uu xusay Madaxweynuhu in isaga iyo weftiga uu hogaaminayey magaalada Boosaaso in muddo ah u joogeen arrimo la xidhiidh horumarinta iyo dhaqaajinta kaabayasha dhaqaalaha Puntland iyo sidii wax looga qaban laha amniga guud ee gobolada Bari ee Puntland.
“Caasimaddii ganacsiga Puntland ayaan ka imid oo aan muddo ku sugnaa, waxaan u joogey arrimihii la xidhiidhey horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhamaystirkoodi iyo arrimo la xidhiidh amniga gobolka Bari, dhulku waa nabad runtii Boosaaso ayaan ka nimid illaa Garoowe ayaan soo soconay waa wax lagu farxo runtii waana wax lagu faano in kumanaan kun maanta Soomaaliya laysaga gudbayo Alle “SWC” ayaa mahaddaas iskale, isaga ayaa inoo suurta geliyey” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
“isku duubnida shacabka iyo dawladda Puntland waxaan markasta ku boorinayaa inay gacanta ku qabsadaan amnigooda, ilaashadaan iyagu, amni iyo horumar hadaan isku helno waxaan u qurux badnaanaynaa Soomaali ” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay inuu aad ugu farax sanyahay sida wanaagsan ee ay shacabka reer Puntland uga damqadeen uguna gurmadeen walalahooda Muqdisho ee cadawgu dhibaateeyey, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu sheegay in Puntland tahay meesha keliya ee Soomaaliya gudaheeda laga dareemay dhibaatada soo gaadhey shacabkii Soomaaliyeed ee ku le’day Muqdisho 14 October 2017 haday tahay gurmad iyo haday tahay dareen Soomaalinimoba.
Barakacayaasha Cabudwaaq oo Dalbaday in la Caawiyo (dhegayso)